Coca-Cola Tet 2014 Karazana Fonosana Malefaka - Famolavolana
Karazana Fonosana Malefaka
Karazana Fonosana Malefaka Hamorona andiam-pandeha lakana Coca-Cola izay miparitaka amin'ny T millionst an-tapitrisany maneran-tany. Ampiasainay ny famantarana Tết Coca-cola (ny Swallow Bird) ho fitaovana entina hamoronana ireo faniriana ireo. Ho an'ny tsirairay avy, dia ny sidintsidina an-jatony izay noforonina sy namboarina tamim-pitandremana manodidina ny script mahazatra, izay miaraka amina andiana Vietnamese misy dikany. "An", midika hoe Fihavanana. "Tài" dia midika hoe fahombiazana, "Lộc" dia midika hoe Fahombiazana. Ireo teny ireo dia miovaova be mandritra ny fialan-tsasatra ary amin'ny haingo ny haingo ny Ttt haingo.
Anaran'ny tetikasa : Coca-Cola Tet 2014, Anaran'ny mpamorona : Rice Creative, Anaran'ny mpanjifa : Rice Creative.
Karazana Fonosana Malefaka Rice Creative Coca-Cola Tet 2014